Ciidamada Al Shabaab oo Gaadiid Dagaal iyo Hub Ku Qabsaday Dagaallo Culus oo Ka Dhacay Deegaanka Godob-Jiiraan Ee Gobolka Nugaal.
Friday March 18, 2016 - 16:46:44 in Wararka by Super Admin
Dagaallo culus ayaa dib uga qarxay deegaanno katirsan gobollada Nugaal iyo Bari ee dhaca waqooyi Bari soomaaliya waxaana halkaasi ka jira maamulka Puntland isku magacaabay.
kolonyo katirsan ciidanka Xarakada Al Shabaab
Wararka ka imaanaya deegaanka Godob Jiiraan ayaa sheegaya in dagaallo culus ay saaka illaa iyo maanta duhurkii ka socdeen kuwaasi oo u dhaxeeya maleeshiyaadka maamulka Puntland iyo ciidamo taabacsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Ilo wareedyo ay SomaliMeMo ka heshay dadka deegaanka ayaa xaqiijinaya in ciidamada Mujaahidiintu ay si buuxda ula wareegeen gacan ku heynta deegaanka Bad-qabo islamarkaana ay dagaal culus uga jiraan Godob-Jiiraan.
Warar lagu kalsoonyahay ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dagaalka ku qabsadeen gaadiid dagaal iyo saanada hub ah, sarkaal sare oo katirsanaa maamulka Puntland ayaa lagu dilay dagaalka Godob Jiiraan ka dhacay waxaana lasoo sheegayaa in xoogaga Al Shabaab ay deegaano hor leh qabsadeen.
Togga Suuj ee qalcadaha caanka ku ah dagaallo culus ayaa xalay abaara 10:00 habeenimo ku dhaxmaray xoogaga Al Shabaab iyo Maleeshiyaadka maamulka Puntland, dagaalkaasi ayaa lasoo sheegayaa in dhanka Puntland uu ku qasbay dib ugurasho halka xoogaga Al Shabaab ay isku faafiyeen dhul istiraatiiji ah oo ka baxsan Suuj.
Dhinaca degmada Bandar-beylla ee xeebta ku teedsan wali xaalad hubanti la'aan ah ayaa kajirta, guddoomiyaha degmadaasi ayaa warbaahinta u sheegay in xoogaga Al Shabaab ay ku suganyihiin hareeraha degmadaasi.
Dagaalkan ka curtay gobollada Nugaal iyo Mudug ayaa walwal ku abuuray maamulka Puntland isku magacaabay oo durbadiiba u qeylla-dhaansaday dowladaha shisheeye.